Maxakamadda Darajada 1-aad ee Ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukuno isugu jira Dil iyo Darajo Qaadis…. – idalenews.com
Maxakamadda Darajada 1-aad ee Ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukuno isugu jira Dil iyo Darajo Qaadis….
Maxakamadda Darajada 1-aad ee Ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukuno isugu jira Dil iyo Darajo Qaadis ku ridday C/naasir Xoosh oo dilay EX. Abaanduulihii Ciidanka Badda Soomaaliyeed Siciid Aadan yuusuf (Siciid Mariino).
Fahfaahin:Kulan dhexmaray Jawaari iyo danjiraha Imaaraadka kaa soo qaatay saacadda badan
Koonfur Galbeed:Wasaaradda Dastuurka Koofur Galbeedka oo xiriirka u jartay Wasaaradda Dastuurka Federaalka